Satoshi Nakamoto – Bitcoin, andian-tsoratra Chain
the founder of Bitcoin and creator of unique Bitcoin client, mitarika ny lisitry ny olona nanan-kery indrindra izay nanao ny anjara biriky lehibe indrindra ho an'ny orinasa crypto. Vao haingana teo ambany fanombanana ny Quartz, ankehitriny Satoshi Nakamoto mety ho avy 980,000 ny 1 tapitrisa BitCoins. Tamin'ny volana Desambra, bitcoin mpamorona ny tsy mitonona anarana ho nahita $19.4 lavitrisa na efa manan-karena indrindra ny faha-44 ny olona eto amin'izao tontolo izao. Raha bitcoin no lasa maneran-vola, Satoshi Nakamoto angamba no ho manankarena olona eto amin'izao tontolo izao. Fa izay miafina eo ambanin'ny solonanarana ny Satoshi Nakamoto dia tsy mbola fantatra.
Ny fantatsika dia hoe White Paper “Bitcoin: Ny ataon'ny mpiara-to-ataon'ny mpiara Electronic Cash System” Navoaka eo ambanin'ny solonanarana ny Satoshi Nakamoto Oktobra 31, 2008. Izany White Paper namariparitra ny rafitra Décentralisées tanteraka ny elektronika vola, izay tsy mitaky na antoko fahatelo. Ny mombamomba azy tao amin'ny vohikalan'ny ny P2P Foundation dia milaza fa Satoshi Nakamoto dia 42 taona, olom-pirenena ao Japana, ary manome ny rohy bitcoin.org. Rehefa tapitra ny 2010, Satoshi nanambara fa hiala izy mba hiatrehana ny “zava-dehibe kokoa.” Nanomboka tamin'izay dia tsy nisy asa amin'ny anaran'ny Satoshi Nakamoto. Izany no vaovao rehetra izay azo heverina ho azo antoka; ny sisa dia tombantombana sy ny tombantombana.
Nick Szabo – Fifidianana Akama, Cryptocurrencies, Smart Contracts
is a famous cryptography specialist and a researcher in theoretical computer science. Izy no nampiditra voalohany ny foto-kevitra ny “manan-tsaina fifanarahana ” in 1996, izay mamela ny fizarana tsy mampiasa ny fananan'ny antoko fahatelo. In 1998, Szabo namorona ny rafitra ho nomerika décentralisées vola ka nataony hoe “kely volamena.” Tsy mahagaga raha maro ny mpandray anjara amin'ny tsena crypto mihevitra azy Satoshi Nakamoto.
Szabo Nanambara ny mpanohitra an'i SegWit2x, izay tokony natao tao amin'ny tambajotra Bitcoin fararano farany. Nolazainy ny mafy fikororohana ny Bitcoin Network, Bitcoin Cash, toy ny “foibe sock puppetry.”
Last Novambra, Szabo sy mpikaroka Elaine Ou nampiditra ny fomba fandefasana miasa Bitcoin varotra ny onjam-peo famantarana. Ity fomba ity vaovao tao amin'ny Scaling Bitcoin Conference in San Francisco ho fomba iray hiarovana ny tambajotra amin'ny mety ho fanafihana ny firewalls, Network vavahady, na fomba hafa mba hifehy fitongilànana tambajotra izay azo ampiasaina amin'ny fifandraisan-davitra fanjakana na orinasa.
ny ankamaroany dia fantatra amin'ny anarana hoe iray amin'ireo voalohany bitcoin bola, a.k.a. Bitcoin Jesosy, izay tsy mahagaga satria nanomboka Ver mampiasa vola ao bitcoin toy ny tany am-boalohany toy ny ao amin'ny 2011. Tsara homarihina fa Ver no tena miavaka ny olona na dia araka ny fitsipika ny tontolo crypto. In 1999, taorian'ny taona ny fianarana, dia nandatsaka avy tany De Anza College manohana ny raharaham-barotra nitarika manokana. In 2005, dia voaheloka folo volana an-tranomaizina noho ny fivarotana manapoaka tsipoapoaka (tsy ara-dalàna ao amin'ny United States) ao amin'ny eBay. In 2006, Roger Nifindra tany Japana ka nandà zom-pirenena Amerikana. In 2012, dia tonga iray tamin'ireo mpanorina ny fikambanana tsy mitady tombontsoa, Bitcoin Foundation, izay mikendry ny "manara-penitra ny, hiarovana, sy hampiroborobo ny fampiasana ny Bitcoin cryptographic vola ho tombontsoan'ny mpampiasa eran-tany. "Amin'izao androntsika izao Ver no miandraikitra ny fanompoana mpanjifany cryptocurrency, Bitcoin.com
Nandritra ny taon-dasa, ny anaran 'i Roger Ver imbetsaka niseho teo amin'ny haino aman-jery noho ny fampidirana ny vaovao cryptocurrency, Bitcoin Cash, izay manohana be dia be ankehitriny. Araka ny heviny, Bitcoin Cash dia “tena bitcoin” izay manohana ny soatoavin'ny Satoshi Nakamoto.
no faharoa malaza indrindra ho kandidà ny lohatenin'ny “marina” Satoshi Nakamoto. In 2011, dia Nanjary iray amin'ireo voalohany altcoins, Litecoin, izay niseho vokatry ny fikororohana ao amin'ny tambajotra Bitcoin. Hanombantombana ny olona fa mety ho Litecoin “ny volafotsy ho bitcoin ny volamena.” In 2013, Lee nitondra ny toerana ny tale ara-teknika ao amin'ny Coinbase, cryptocurrency sehatra lehibe. fa amin'ny 2017, dia nanapa-kevitra ny handao ny orinasa hifantoka amin'ny fampiroboroboana Litecoin.
Nandritra ny taona, ny tahan'ny cryptocurrency nitombo mihoatra ny im-polo, ary ankehitriny mijoro amin'ny $255. Tamin'ny volana Desambra, Charlie Lee nanambara fa efa nivarotra ny fananany rehetra ny Litecoins mba tsy misy afaka niampanga azy ny mahakasika ny fiovaovan'ny vidin'ny. Izy nanamafy fa tsy handeha hiala ny tetikasa, ary ho foana ny hanokana fotoana rehetra io asa io.
ny mpivarotra sy ny mpampiasa vola bitcoin sy Eks-Vice-Président ao amin'ny JPMorgan Chase-dia fantatra tsara ao amin'ny fiaraha-monina crypto. Weiss dia noheverina iray amin'ireo voalohany blockchain evanjelista mampiroborobo ny teknolojia ho an'ny vahoaka satria 2013. Manana bilaogy mahomby, ny podcast ity, ny Youtube Channel, ary mihoatra noho ny 80,000 mpanara-dia ao amin'ny Twitter. CoinTelegraph Matetika mamoaka ny fanehoan-kevitra sy ny fitaovana. Fanampin'izany, in 2014, Weiss lasa Lohan'ny Research amin'ny BraveNewCoin.
Araka ny Weiss’ fikarohana, izay nivoaka tao tamin'ny Septambra sy Mifototra amin'ny exponential bitcoin fitomboan'ny mpampiasa, Tamin'ny faran'ny 2018, bitcoin vidiny manana ny hery anaty hisongona ny $100,000 marika. taloha, Weiss nilaza fa, Tamin'ny faran'ny 2017, bitcoin no hiampita ny $15,000 marika, izay no mandinika Desambra 17. Weiss ampahibemaso mitsikera ny fomba fiasa ankehitriny ny fitaizana bola amin'ny alalan'ny ICO, toy ny 90% ny ICO tetikasa dia “natrehin'ireo fotsiny.”
dia ny mpiara-manorina ny iray amin'ireo tetikasa lehibe indrindra cryptocurrency, Ethereum, ary ny tompon-tany cryptocurrency, izany hoe Etera. In 2013, Buterin namoaka cryptocurrency White Paper naorina eo amin'ny blockchain, mpampiasa izay afaka mampiasa marani-tsaina fifanarahana izay manome azy ireo fahafahana tsy manam-paharoa maro.
Hatrany am-piandohan'ny taona, Nitombo ny tahan'ny Etera 57 fotoana, ary Buterin niditra ho naoty ny American Forbes “30 latsaky ny 30.” Anisan'ny Bloomberg Buterin ao amin'ny lisitry ny 50 pahefana ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny 2017, ary ny Rosiana azy Forbes tafiditra ao amin'ny lisitry ny 100 nanan-kery indrindra tamin'ny taonjato Rosiana.
Taona lasa, Buterin lasa iray tamin'ireo mpandraharaha vitsivitsy izay nihaona tamin'ny Filoha Putin nandritra ny St. Petersburg pirenena Ara-toekarena. Ny antsipiriany ny resaka dia tsy nambara, ary rehefa afaka izany fihaonana, Manam-pahefana Rosiana nanao U-blockchain kosa ny teknolojia sy ny cryptocurrencies, niantso blockchain mahaliana teknolojia mendrika ny saina. Ary, dia fantatra fa Ethereum handeha hanomboka ny tetikasa miaraka amin'ny mpiara Vnesheconombank (WEBSITE); Sberbank nanatevin-daharana ny tetikasa iraisam-pirenena Enterprise Ethereum Alliance (EEE), izay efa midika fotsiny 200 orinasa, ka tonga voalohany tao EEA Banky Rosiana.
Gavin Wood – Parity Technologies, Fitafy miteboteboka
no mpiara-manorina sy teo aloha CTO amin'ny Ethereum, izay nanova ny Ethereum voalohany nosoratan'i White Paper Buterin ho toy ny tena mihazakazaka fandaharana. Ary Wood mitarika ny orinasa Parity Technologies, izay mampivelatra rindrambaiko ho an'ny tambajotra blockchain. Izy ihany koa no mpiara-manorina ny startup Polkadot, izay mampivelatra ny fifanarahana izay hamela fanatsarana ny tambajotra scalability ho mifanentana kokoa ny tsy miankina sy ny blockchains-bahoaka.
The 2017 taona hita ho sarotra ho an'ny Wood. Tamin'ny fiandohan'ny taona, soa aman-tsara ny orinasa namoaka ny Parity 1.5, Ethereum tambajotra iray nohavaozina mpanjifa. Fa rehefa tsara fiandohana, eo afovoan'ny taona, Parity Technologies miatrika zava-tsarotra mafy.
Last Jolay, ny mpanjifany ireo nijirika. Ny mpijirika nahita ny bibikely ao amin'ny fifanarahana amin'ny multisignature, izay namela azy ireo hangalatra 153,000 ethers (about $32 tapitrisa tamin'ny fotoana). Parity namoaka ny nohavaozina dikan-tenin'ny mahay fifanarahana mba hamahana ity olana ity. Na dia izany aza, tsarotra iray hafa bibikely, izay mitoetra ao amin'ny famakiam-boky izay mitantana ny lojikan'ny mpanjifany, dia hita tamin'ny Novambra. Vokatry ny programa а ny fahadisoana, manodidina $152 tapitrisa dia malalaka amin'ny mpampiasa Parity’ kaonty.
Araka ny Wood, ny mpampiasa’ Hafanàm-po an fananana voatahiry eo amin'ny sehatra dia tanteraka soa aman-tsara, T fa tsy mbola azo atao ny misintona azy ireo amin'ny tambajotra. Tsara homarihina fa teo anivon 'ny mangatsiaka dia fananan'ny $98 tapitrisa natsangana ny Polkadot startup amin'ny alalan'ny ICO.
Ny tena dikan-malaza hoe iza no tena ao ambadiky ny anaran 'i Satoshi Nakamoto no manaraka ireto:
Nick Szabo - ny mpahay siansa eo amin'ny sehatry ny informatika, Fifidianana Akama, sy ny lalàna, ary koa ny mpikaroka ny marani-tsaina sy ny fifanarahana cryptocurrency.
Charlie Lee - ny mpamorona ny Litecoin.
Neal King, Vladimir Oksman, ary Charles Bry - ny mpanoratra ny patanty fampiharana, antsoina hoe “Fanavaozana sy ny fizarana encryption fanalahidy.”
Michael Klare - nahazo diplaoma tamin'ny Fifidianana Akama in College ny Dublin.
Hal Finney - ny Fifidianana Akama pahaizana manokana.
Dorian Nakamoto - ny olom-pirenena ny United States (California) Japoney fiaviana.
Craig Wright - Aostralia mpandraharaha.
Elon Musk - malaza miliaridera, lohan'i Tesla sy Space X, ary ny mpikambana ao amin'ny Birao amin'ny SolarCity
Rehetra ireo, afa-tsy Craig Wright, mandà ny an'ny voalohany cryptocurrency. Angamba, Izany dia vaovao tsara ho tapa-tsena ny crypto satria mihazona Nakamoto 5% rehetra BitCoins. Noho izany, Nakamoto, raha tianao, be mety hisy fiantraikany ny tahan'ny sy ny crypto bitcoin tsena.
Previous Post:Blockchain News 9 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 10 Janoary 2018